Paikady atiny sy fanatsarana ny atiny
Matetika aho no nahatsikaritra fa misy ny sasantsasany amin'ny media sosialy milaza amin'ny orinasa fa tsy maninona izany izay mandray anjara amin'ny haino aman-jery sosialy izy ireo, raha ny tena izy do. Ny hafa miady hevitra momba ny fampandrosoana a Tetikasan'ny media sosialy talohan'ny nanombohany.
Misy fanontaniana dimy tokony hapetrakao amin'ny tenanao rehefa mamorona atiny amin'ny Internet:
Aiza no tokony hametrahana ny atiny? - ny sehatra anaovanao ny atiny dia tokony hohatsaraina ho an'ny mpihaino kendrena tadiavinao. Raha manandrana manatona ireo mpampiasa motera fikarohana ianao dia aza hadino ny mampiasa sehatra iray izay nohamarinina ho an'ny motera fikarohana. Raha manandrana manatona ireo mpampiasa orinasa sy orinasa ianao dia aza hadino ny mifantoka amin'ireo tambajotra mifandraika amin'ny orinasa. Raha mikasa ny hanome horonantsary avo lenta ianao dia apetraho amin'ny sehatra afaka manompo azy.
Ahoana no tokony hametrahana ny atiny? - Ao ny atiny hitarika fifamoivoizana, ary amin'ny farany, orinasa ho an'ny orinasanao. Ny fametrahana ny atiny amin'ny antso-to-hetsika matanjaka izay mifandraika amin'ny fitaterana ny varotra dia zava-dehibe. Raha manoratra bitsika ianao ary te haverina haverina, avelao ny toerana mihoatra ny tarehin-tsoratra 140 ho an'ny mpandray na fanehoan-kevitra bebe kokoa.
Inona no atiny tokony hapetraka? - ny atiny heverina fa mahasarika ny fifamoivoizana dia mety mila mailo kokoa noho ny atiny izay mifanentana amin'ny teny fanalahidy fotsiny ho an'ny motera fikarohana. Ny atiny ao anaty boky e dia tokony tsy dia mifampiresaka sy mifandamina kokoa. Ny atiny ao anaty bilaogy iray dia tokony hatao bala, misy sary misy solontena, miaraka amin'ny fomba fanoratra resadresaka.
Rahoviana no apetraka ny atiny? - raha ny hitaona ny olona hanatrika hetsika iray no tanjonao dia manaova drafitra manaparitaka votoaty mialoha, mandritra ary aorian'ny hetsika hampiroboroboana azy. Raha mpihaino fandraharahana ny tanjonao dia mamoaka amin'ny andro faran'ny herinandro. Ny fahafantarana ny fotoana hamoahana atiny dia mampiakatra ny fiovam-ponao tokoa.
Impiry aho no tokony hametraka ny atiny? - indraindray, ny famerimberenana ny hafatra dia mety hampitombo ny fiovam-po tanteraka. Indraindray ny fanoratana indray mandeha isam-bolana amin'ny lohahevitra manokana dia mety hitarika amin'ny fanatsarana ny tahan'ny fahazoana fa tsy ny fanoratana azy indray mandeha fotsiny ary ny fijanonana. Aza matahotra ny hamerina ny tenanao. Adino ireo mpitsidika miverina (na mila fampahatsiahivana) ary mety tsy mbola nahita ilay hafatra ireo mpitsidika vaovao.
Ny famoahana atiny amin'ny Internet tsy misy tetikady dia mety hahazo valiny vitsivitsy aminao fa tsy hanatsara sy hanararaotra tanteraka ny asa ataonao. Tena sarotra ny mampivelatra atiny izay misy akony - aza hadino ny mamaly fanontaniana vitsivitsy amin'ny atiny nosoratanao fa tsy manipy azy fotsiny.
Tags: fanoratana bokyvola miditrahevitry ny mpampiasahevitry ny mpampiasa
Fanamafisana ny atiny hananganana fitokisana